Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha JWXO Adm. Maxamad C. Cismaan oo la shiray xubnaha iyo hawl-wadeenka jaaliyadda Finland
Gudoomiyaha JWXO Adm. Maxamad C. Cismaan oo la shiray xubnaha iyo hawl-wadeenka jaaliyadda Finland
Waxaa khamiistii ooy taariikhdu ahayd 23/1/2014, soogaadhay caasimada dalkan Finland ee Helsinki wafti balaadhan oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xorayta Ogadeniya (JWXO) Admiral Maxamed Cumar Cismaan, Waftigan oo kormeer shaqo Kumarayay qaarada yurub kuwaasoo ay kulamo kula yeelanayaa Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kudhaqan Qaarada Yururb. Hadaba maanta ayey waftigu lashireen Xubnaha iyo Hawlwadeenada kala duwan ee kahawlgala wadanka Finland. Shirkan oo siwanaagsan losoo agaasimay ayaa maanta abaarihii 3:00 PM galabnimo Ku bilowday jawi aad u quruxbadan. Aayado qur’aaan ah kadib ayuu shirku sirasmi ah ufurmay.
Waxaa codbaahiyaha sidiiran loogusoo dhoweeyey Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida Ogadeniya ee wadanka Finland Halgame Maxamed Muxyadiin. Wuxuu Gudoomiyuhu soobandhigay warbixin kooban oo kusaabsan waxqabadka Jaaliyada Finland. Intaas Kadib waxaa lagusoo doweeyey Gudoomiyaha Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadeniya Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo warbixin dheer oo gudo iyo dibadba taabanaysa siiyey xubnihii iyo masuuliinta madasha shirka kasooqaybgalay.
Sidookale waxaa madasha shirka khudbado dhaxalgal ah kasoo jeediyay masuuliyiintii kalee kuwehelisay gudoomiyaha kormeerka shaqo kuwaasoo kala ahaa Gudoomiye Kuxigeenka Hogaanka Warfaafin (HWF) Halgame Maxamed Cali Axmad iyo Madaxa Waaxda Arimaha Ururka ee Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka (HAAU) Halgame Cabdinaasir Gadhwayne. Waxaan iyana ka maqnayn warbixino aad uqiimo badan ooy soo bandhigeen masuuliyiinta ururada bulshada ee Jaaliyada Finland sida ururka Hooyooyinka iyo Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU).
Shirkan ayaa kusoo idlaadlay jawi aad quruxsan kaasoo ay hadhaysay farxad iyo mooraal sareeyo oo laga dheehan karay wajiyada kasoo qaybgaleyaasha kulankan kuwaasoo dhamaantood aad uxiisaynayay lakulanka waftigan heerka sare ah ee uu hogaaminayo Gudoomiyaha JWXO.
Hadii allaha awooda lihi ogolaato barito ooy taariikhdu tahay 26/1/2014 ayaa loo balansanyahay shirwaynaha guud oo jaaliyadoo dhami isugu imaan doonto caruur iyo cirooleba. Waxaa lafilayaa in siwanaagsan looga soo qaybgali doono Inshaa Allah.